Guitar Hero II Cheats iyo siraha loogu talagalay XBox 360
Qiyaanoole, Talooyin, Talooyin, iyo siraha loogu talagalay Guitar Hero II ee Xbox 360 Konsole
Guitar Hero II waa kan labaad ee ciyaaraha fiidiyoowga ah ee muusigga ah oo aad adigu isticmaasho kumbuyuutarka guitar-ka lagu ciyaaro si aad u ciyaarto jilbaha, bass, iyo guitarsiyada casriga ah sida xusuus qoraalada dhagaxyada dhagaxyada kala duwan oo dhan. Qiyaanoolada Guitar Hero ayaa kuu ogolaanaysa inaad furto heesaha iyo xawaarida ciyaarta, oo ka mid ah hawlaha kale.
Gali cheat for Guitar Hero II on Xbox 360 ee ku yaal menu ugu weyn, halkaas oo aad arki doonaa fursadaha shaqooyinka iyo hababka dhaqso ah. Xaaladda xirfadeed, waxaad abuureysaa koox iyo dooro guitarist liis siddeed xarfaha la heli karo. Nooca cayaarta si dhaqsi ah-sida magaca uu tilmaamayo - wuxuu ku siinayaa hab sifiican oo loo bilaabi karo heeso adoo dooranaya dabeecadda, goobta, guitar, iyo maqaarka guitar iyadoo lagu saleynayo heeska aad dooratay.
Uma baahnid inaad haysato badhanka xulashada si aad u gasho khiyaamo; si fudud u geli shaashadda ugu weyn ee menu. Waa inay qaadataa qiyaastii seddex ilbiriqsi si ay u galaan code.
Xil Hawsheed : Xadidaad Code: Blue, Blue, Yellow, Blue, Blue, Orange, Blue, Blue
Wuxuu awood u yeeshaa Hyperspeed : Blue, Orange, Yellow, Orange, Blue, Orange, Yellow, Yellow
Furaha Dhamaan Dhammaan Heesaha : Tani waa qoob ka ciyaara dhamaan-heesaha khiyaanada loogu talagalay qaabka PAL (Yurub) ee ciyaarta: Blue, Yellow, Orange, Red, Yellow, Orange, Blue, Yellow, Blue, Yellow, Blue, Yellow, Blue, Yellow, Blue, Yellow.
Dhex Dhamaan Dhammaan Heesaha : Tani waa qoob-ka-ciyaaro dhamaan-heesaha khiyaanada loogu talagalay NTSC (US) nuqulka ciyaarta. Blue, Yellow, Orange, Red, Orange, Yellow, Red, Yellow, Red, Yellow, Red, Yellow, Red, Yellow, Casaan, Yellow.
Daanyeerka Madaxa Madaarka : Orange, Yellow, Blue, Blue, Yellow, Orange, Blue, Blue
Madaxyada ololaha : Orange, Yellow, Yellow, Orange, Yellow, Yellow, Orange, Yellow, Yellow, Blue, Yellow, Yellow, Blue, Yellow, Yellow
Eyeball Head Crowd : Yellow, Orange, Blue, Blue, Blue, Orange, Yellow
Guitar geesinimada ka soo baxda version PS2 kama shaqaynayso Xbox 360.
Isticmaalka Guitar Hero II khiyaameeya ma saameyn karto dhibcaha dhibcaha guusha.
Ku laabashada code khiyaamo ah Guitar Hero II waxay dhalin doontaa in la demiyo khiyaamada.
Waxaad yeelan kartaa in ka badan hal khiyaano ah isla waqti isku mid ah.
Guitar Hero 2 Goobjoogayaal
Goobaha soo socda ayaa laga yaabaa in la furo Guitar Hero II:
Guitar Air : Isticmaal xeerka khiyaameeya ee kor ku xusan.
Qalabka Guitar: Ku Dhaqaaq Hab Dhaqanka.
Guitar Casket: Dhibaato dhexdhexaad ah.
Eyeball Guitar: Ku guuleysta shan xiddigood oo heeso kasta oo ku yaal Muujin adag.
Guitarrada Kaluunka: Kaliya Dhibaato Mode.
Snaketapus Guitar : Dhibaatada Hooska.
Guitar Log (Guitar Log) : Ku guuleysto shan xiddig oo heeso kasta ku leh Habka Khibrada leh.
USA Guitar : Ku guuleysto shan xiddigood oo heeso kasta ku qoran Mode Easy.
Viking Guitar : Ku guuleysto shan xiddig oo heeso kasta ku qoran Habka Dhexdhexaadka ah.
Guitar Hero II waxay leedahay 10 heeso oo kaliya oo laga heli karo Xbox 360, oo ay ku jiraan laba heeso oo aad u baahan tahay inaad furto adoo iibsanaya ciyaarta (iyadoo la isticmaalayo habka lacagta ee ciyaarta).
"Milyan Dollar Babies" -Alice Cooper
"Dhimasho!" - Jacaylka Kimikada
"Nolol-daro" -Maxamed Jam
"Boqortooyada Possum" -Daawooyinka
"Rock 'n' Roll Hoochie Koo '-Rick Derringer
"Trooper" -Arri Maiden
"Cabbidho" -Sawirkii is-dhaafsiga (heesaha la furay)
"Laga soo bilaabo Curb" -Bogga Dib-u-laabashada (heesaha aan la furin)
Guulaha soo socda waxaa laga yaabaa in laga furo Guitar Hero 2 oo ku yaal Xbox 360 konser video. Si aad u furto mid ka mid ah guulahan soo socda, si fudud u buuxi hawsha lagu tilmaamay hoosta.
100K Club - dhibcaha 10 dhibcood.
Ku heeso 100,000 dhibcood.
200K dhibcaha Club- 10 dhibcood.
Ku heeso 200,000 dhibcood.
300K Club - 30 dhibcood oo ciyaaraha kubada cagta ah.
Qaado 300,000 dhibicda heesaha.
Kulanka 400K - 30 dhibcood.
Qaado 400,000 dhibicda heesaha.
Qolka Champagne Qolka VIP -30 ee dhibcaha ciyaaraha.
Qaado 500,000 dhibcood oo heesta.
Roadie - dhibcaha 10 gamerscore.
Furo Furaha Sare.
New Kid - 10 dhibcood gamerscore.
Furo Akhriska Barashada.
Young Gun - dhibcaha 10 dhibcood.
Unlock Unlock RedOctane Club.
Axulada Qalabka -10 gamerscore.
Furo Tiyaatarka Masraxa Magaalada.
Shredder -10 dhibcood.
Furo Vans Vans Tour Tour.
Rock Star - dhibco 10 dhibcood ah.
Furo Harmonix Arena.
Guitar Hero - dhibcaha 10 dhibcood.
Dimebag Darrell Award -10 dhibcood ciyaaraha.
Soo qaado 100 xaraf ah.
Eddie Van Halen Award -30 dhibcood.
Soo qaado 500 darajo qoraal ah.
Yngwie Malmsteen Award -30 dhibcood.
Soo qaado 1000 darajo qoraal ah.
Easy Tour Champ - 10 dhibcood.
Ku garaac safarka fudud.
Dhexdhexaadinta Dhexdhexaadinta Champ -30 gamerscore dhibcood.
Ku dhufo dalxiis dhexdhexaad ah.
Hard Tour Champ -30 gamerscore dhibcood.
Ku garaac safarka adag.
Khibradda Dalxiiska ee Champ - 30 dhibcood ee ciyaaraha.
Ku garaac safar khibrad leh.
Sanduuqa Sanduuqa Hero Award - 30 dhibcood oo ah dhibcaha ciyaaraha.
Ku guuleysto shan xiddigood dhammaan heesaha safarka fudud.
Inta badan Wanaagsan Abaalmarinta Abaalmarinta - 30 dhibcood ah.
Ku guuleysto shan xiddigood dhammaan heesaha ku jira safarka dhexe.
Guitarmaggedon Award - 30 dhibcood ee ciyaaraha.
Ku guuleysto shan xiddigood dhammaan heesaha safarka adag.
Ku bilow Abaalmarinta Abaalmarinta Horyaalka Real - 30 dhibcood.
Ku guuleysto shan xiddigood dhammaan heesaha ku jira safarka khibradda leh.
Rugta Dugsiga ruxa - 10 dhibcood.
Dhammaan barashooyinka dhan.
Abaalmarinta Aasaasiga ah - 10 dhibcood ee ciyaaraha kubadda cagta.
Qaado 8x dhejis ah.
Abaalmarinta Aasaasiga ah - 30 dhibcood oo ciyaaraha ah.
Keen 100% qoraallo ku dhufo heeso.
Abaalmarinta Rock Snob Award -10 dhibcood.
Iska diid inaad ku ciyaarto xero.
Abaalmarinta Wadada Waddada dheer - 10 dhibcood ah
Ku guuleysta heeso fudud.
Abaalmarinta Hendrix - 10 dhibcood 7 dhibcood.
Ku garaacista hees leh lafdhabar.
Abaalmarinta Macalinka ee Macalinka - 10 dhibcood oo ah dhibcaha cayaarta.
Ku tababar saddex heesood oo kala duwan.
Abaalmarinta Abaalmarinta Sabtida - 10 dhibcood oo isku xigta.
Beat Trogdor iyo Thunder Horse.
Ku guuleysiga Abaalmarinta Bucket - 30 dhibcood oo ciyaaraha ah.
Beat Jordan ku leh Khabiir.
Gear Head of Award - 30 dhibcood oo ciyaaraha ah.
Iibso dhammaan guitars.
Abaalmarinta Abaalmarinta Fanaanada - 30 dhibcood oo ciyaaraha ah.
Soo iibso dhammaan gitaarka guitar.
Abaalmarinta Abaalmarinta Collector - 10 dhibcood oo ciyaaraha kubada cagta ah.
Iibso heesaha oo idil.
Nolosha Abaalmarinta Xisbiga - 10 dhibcood oo ciyaaraha ah.
Soo iibso dhammaan jilayaasha.
Abaalmarinta Fashion Plate - 10 Points dhibcood.
Soo iibso dhammaan dharka.
Abaalmarinta Abaalmarinta dheeraadka ah - 10 dhibcood ah.
Abaalmarinta Big Spender - 10 dhibcood ee ciyaaraha kubada cagta.
Ku diyaari $ 10,000 dukaanka.
Abaalmarinta Scenester - 10 dhibcood.
Ku garaac dhamaan dhamaan heesaha.
Joan & Lita Award - 30 dhibcood ciyaaraha.
Waxaad heshaa 100 buundo oo qoraal ah.
Joe & Steven Award - 30 dhibcood ee ciyaaraha.
Soo qaado 500 darajo qoraal ah oo wada shaqeyn ah.
Abaalmarinta Qaadka & Mike - 30 dhibcood
Soo qaado 1000 xariiq oo qoraal ah oo wada jir ah.
Lennon iyo McCartney Award - 10 dhibcood ee ciyaaraha.
Hel 8x xariiqa wadaag.
Page & Award Award - 30 dhibcood ciyaaraha.
Soo qaado boqolkiiba 100 waraaqo ku dhufo heeso Cooperative.
200K Pair - 30 dhibcood ciyaaraha kubada cagta.
Ku heeso 200,000 dhibcood heeso wada jir ah.
400K Pair - 30 dhibcood ciyaaraha kubada cagta.
400,000 dhibcood ku qaado heesaha Cooperative.
600K Pair - 30 dhibcood ciyaaraha.
Waxaad 600,000 dhibcood ku qaadataa hees ah Cooperative.
800K Pair - 30 dhibcood ciyaaraha kubada cagta.
Hel 800,000 dhibcood oo ku heesta heeso wada jira.
Millionaire Pair -30 gamerscore dhibcood.
Hel 1,000,000 dhibcood oo ku heesta heeso wada jira.
Ma rabtaa in badan oo guitar?
Guitar Hero Smash Hits waxay ku jirtaa liistada dhameystiran
Guitar Hero World Tour liiska heesaha oo dhan
Liiska Guitar Hero Live Live
Madden NFL 06 Xakameyaha Xawaareyaha
Talooyin muhiim ah iyo tabaha loogu talagalay dadka cusub ee Xbox One
The Godfather 2 Cheats, Xeerarka, iyo siraha loogu talagalay Xbox 360
The Walking Dead S1 iyo S2 Xbox One Impressions
Top Ten Xbox One Games ee 2015
Microsoft Xbox 360 Kombiyuutarada
Waa maxay nidaamka Xbox 360?
MX iyo ATV: Dib u eegida Supercross (X360)
KeRanger: Macmuurkii ugu horreeyay ee Macmacaanka ee Wild Discovered
Waa maxay Multitasking ee Smartphones?
Sida loo dejiyo iyo Futsal Folder-ka gaaban ee ku yaalla IOS
9 Tilmaamaha Ugu Fiican ee Apple ApplePod
Saaro sifooyinka laga soo bilaabo xogta ee Excel
Baro in ay furaan Dukumiinnada EML ee Windows Live Mail ama Outlook Express
Isticmaalida Kuuboon si aad u hesho Kumbuyuutar Yar
Maxay Pixels yihiin iyo Maxaa loola jeedaa daawashada TVga?
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo Raadiyaha Pandora
Faahfaahin buuxda oo ku saabsan Heesaha 'Guitar Hero 4' (World Tour) '
Xallinta Dhibaatooyinka Xirfadaha USB-ka leh MP3-ka
Sida Loo Dhiibo Rikoodhka Hore ee Emailka ee Mac OS X Mail
Fikradahayga ku saabsan HTC 10 Koobi iyo Shaybaar
Maxay Faylka F4V?
Maxay Foomka PPTM?
Waa maxay Alexa?